Ungayikhetha njani umnini wekhadi leshishini?
Kungakhathaliseki ukuba luhlobo luni lomsebenzi, Inkqubo yokutshintshiselana ngamakhadi oshishino ibaluleke kakhulu. Xa ukhupha ikhadi leshishini elicocekileyo kumnini wekhadi elifanelekileyo, elinye iqela lithe cwaka ngaphakathi entliziyweni yakho. Ke ngoko, umnini wekhadi leshishini elifanelekileyo yeyona ndawo ifanelekileyo yamakhadi eshishini. Emva koko ndiza kuzisa izinto ezininzi zokubamba amakhadi eshishini.…
Imbali yabanini bamakhadi eshishini
Njengomthuthi womboniso ogciniweyo wolwazi lomntu, kubantu abashishini, ikhadi lebhizinisi le-chic linokuba linyathelo lokuqala lokuvula ucango olubalulekileyo lweshishini. Kwaye ukuba ukhupha ikhadi leshishini kwisipaji esidumbileyo okanye epokothweni yakho, iziva ingaqhelekanga okanye ingakhuli-ngeli xesha, ufuna umnini wekhadi leshishini elikudibanisa nawe. "Yonke…
Uyikhetha njani iwallet ekufaneleyo?
Ukugqibela kwam ukwazisa ngokuhlelwa kwezipaji. Ukujongana neendidi ezininzi zeewallethi, kufuneka sikhethe njani isipaji esivumelana nathi? Ngeli xesha ndiza kukhokelela wonke umntu ukuba abone ukuba singakhetha njani ukujongana nezipaji ezininzi Ukukhetha isipaji: 1. Isipaji esihle masenziwe ngesikhumba sendalo, nokuba sisikhumba senkomo esiqhelekileyo,…
Iwalethi, Isipaji ngesiNgesi, zisetyenziselwa ukugcina imali, kwaye abantu abaninzi babeka amakhadi e-ID okanye amaphepha-mvume okuqhuba. Abantu bala maxesha basebenzisa imali yamaphepha. Igama elithi Isipaji lithetha ipakethi ethe tyaba equkethe imali yamaphepha. Uhlobo lwesipaji: Isipaji sebele (isipaji sesifuba, Isipaji eside, ithiyori ebizwa ngokuba yingxowa yebele akukho ngxaki) Esi sikhwama sixande sixande isitayile esidala, imali…